Funda indlela yokubhala iNdaba yeendaba
Inyathelo ngeZinyathelo Izikhokelo zokubhala iNdaba yeendaba
Abafundi abaninzi bathabatha iikhompyutheni ngenxa yokuba bathanda ukubhala, kwaye ezininzi izifundo zengxelo zogxininisa kakhulu kwi-craft yokubhala.
Kodwa into ebalulekileyo malunga nokubhala kweendaba kukuba ilandela isakhiwo esisiseko. Funda ukuba ifomathi kwaye uza kuba nokubhala ibali leendaba, nokuba ungumlobi onobuchule okanye ongenalo.
Ukubhala iLede yakho
Inxalenye ebaluleke kakhulu kwaliphi na ibali leendaba elibhaliweyo, isona isigwebo sokuqala sebali leendaba.
Kulo, umbhali ushwankathela amanqaku amanqaku afanelekileyo eendaba kwiibrushstrokes.
Ukuba i-lede ibhaliwe kakuhle, iya kunika umfundi ingcamango engundoqo yento ibali eliphathelele ngayo, nangona ukuba uyadlula phezu kwebali lonke ibali.
Umzekelo: Abantu ababini bafa emlilweni womlilo waseNortheast Philadelphia ebusuku.
Uyabona oko ndiyithethayo? Ukususela kule ndawo ufumana izinto ezisisiseko: Abantu babulawa. Umlilo wendawo. E-Northeast Philadelphia.
Ngoku, ngokucacileyo kuninzi kule bali: Yintoni eyenza umlilo? Ngubani owabulawa? Yayiyiphi idilesi yesigxina? Kwaye nangokunjalo.
Ezi nkcukacha ziya kubakho kwibali. Kodwa umxhelo usinika ibali ngokucacileyo.
Abaqalayo bahlala benenkathazo yokucinga into ekufuneka bayifake kuyo kunye nokokushiya. Kwakhona, cinga ngemibono ebanzi yombono: Nika iingongoma ezibalulekileyo zebali, kodwa shiya iinkcukacha ezincinci emva koko.
I-Five Ws ne-H
Enye indlela yokufumanisa into ehambayo ekusebenziseni i-Ws ezintlanu kunye ne-H: Ngubani, yintoni, phi, nini, nini na njani.
Ngubani na ibali? Ingaba ingantoni? Zenzeke phi? Kwaye nangokunjalo. Fumana abo kwiimali zakho kunye namathuba uhlanganisa zonke iziseko.
Ngamanye amaxesha enye yezo zinto ziza kuba mnandi kunabanye. Masithi ubhala ibali malunga nomdumo oshona ehlakalweni lwemoto. Kucacile ukuba, yintoni eyenza ibali linomdla kukuba i-celebrity celebrity ichaphazelekayo.
Ukuqhuma kweemoto kunye kunye nakho konke kuqhelekileyo (ngelishwa, amawaka abantu afela ekuphazamiseni imoto unyaka unyaka.) Ngoko uya kufuna ukugxininisa ukuba "ngubani" umcimbi webali lakho.
Kodwa kuthekani malunga nalo lonke ibali, inxalenye ezayo emva kwexesha? Izindaba zeendaba zibhalwa kwifomathi yepiramidi . Izandi ezimnandi, kodwa zonke kuthetha ukuba ulwazi olubaluleke kakhulu luya phezulu, okanye ukuqala kwebali, kwaye izinto ezincinci ezibalulekileyo zihamba ngezantsi.
Senza oku ngenxa yezizathu ezininzi. Okokuqala, abafundi banomlinganiselo omncinci wexeshana kunye nenkcazelo emfutshane, ngoko kunengqiqo ukubeka iindaba ezibalulekileyo ekuqaleni kwebali.
Okwesibini, le fomethi ivumela abahleli ukuba banciphise amabali ngokukhawuleza ngexesha lokugqibela xa kudingekile. Emva koko, kulula kakhulu ukunqumla ibali leendaba ukuba uyazi izinto ezincinci ezibalulekileyo ekupheleni.
Enye into ukuyikhumbula? Gcina ukubhala kwakho ngokuqinile, kwaye amabali akho afutshane. Yitsho into oyifunayo ukuthetha ngamagama ambalwa njengoko kunokwenzeka.
Enye indlela yokwenza oku kukulandela isakhiwo se-SVO, esimele i-Subject-Verb Object. Ukuze ndibone oko ndithethayo, jonga kule mizekelo emibini:
Wafunda le ncwadi.
Le ncwadi yafundwa nguye.
Uthini umahluko phakathi kwezi zivakalisi ezibini?
Eyokuqala ibhaliwe kwifomathi ye-SVO:
Ufunde (isifundo) (isenzi) incwadi (into).
Ngenxa yoko, isivakalisi sisifutshane kwaye siya kumgama (amagama amane). Kwaye ekubeni ukudibanisa phakathi kwesifundo kunye nesenzo esithathayo kucacileyo, isivakalisi sinobomi kuyo. Unokwazi ukucinga ngomfazi ofunda incwadi.
Isivakalisi sesibini, ngakolunye uhlangothi, alulandeli iSVO. Ngenxa yoko, ukudibanisa phakathi kwesihloko kunye noko akwenzayo kuye kwacinywa. Into oshiywe ngayo isigwebo esinamanzi kwaye singacatshangwanga.
Isivakalisi sesibini sinamagama amabini anesixhenxe kunokuqala. Amagama amabini angabonakali ngathi aninzi, kodwa cinga ukusika amagama amabini kwisigwebo ngasinye kwinqaku le-inch. Emva kwangoko kuqala ukudibanisa. Unokudlulisela ulwazi olubanzi usebenzisa amagama ambalwa ngokusebenzisa ifomathi ye-SVO.
I-Mississippi Valley State Admissions
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngayo NgeCawa?
Amehlo ekujonge: Ukuphosa ngokuchanekileyo
Ukuguquka kweMelika: uBaron Friedrich von Steuben